Fil d'actualités du 14/01/2020
14/01/2020 - 09:00 : GREVY: Manao fitokonana ary avy namoaka ny mpianatra tao amin'ny Lisea Analamahitsy ny mpianatry ny sekoly teknika LTP Alarobia amin'izao fotoana izao.
07/01/2020 - 15:00 : FITANTERANA:Nanatanteraka fiarabana ireo Ray aman-dReny (Minisitra,SG, ary ny PCA ny ATT) tetsy amin'ny ministeran'ny fitanterana Anosy (MTTM)ireo solotena vitsivitsy avy ao amin'ny ATT notarihin'ny tale jeneraly ny Jeneraly Reribaka Jeannot noho ny fahatratrarana ny taona 2020.
07/01/2020 - 14:00 : LOZAM-PIFAMOIVIZANA:Fiarabe iray tapaka isatra indray no nandona telo mianaka tetsy Ivato ny maraina teo,vokany:maty ireo Ray aman-dReny tsy hataorana kosa ilay zaza.
07/01/2020 - 11:30 : SOAVINANDRIANA ITASY:Raikitra ny ady tany eo amin'ny tantsaha sy ny ministra teo aloha George Ruphin,manao antso avo ireo vahoaka iharan'ny tsindry azo lena,hiakatra fitsarana ny 22 Janoary ho avy izao ny raharaha.
07/01/2020 - 11:00 : ANTSOHIHY:Ho tanterahina rahampitso 08 janoary ny lanona famindram-pibaikoana ao amin'ny tobimpileovana sofia . Lieutenant col Haja Rakotonirina no komandin'ny vondron-tobimpileovana vaovao ao amin'ny faritra sofia izay hisolo an'i Lieutenant col Poely Florent izay komandin'ny fileovana sofia taloha .Hanomboka amin'ny 09 ora maraina ny lanona eo amin'ny "rond point" mba hahitan'ny be sy ny maro ny lanona sy hafantarana fa miova ny fibaikoana ao amin'ny vondron-tobimpileovana sofia .
07/01/2020 - 10:45 : FANAMBARANA AVY AMIN'NY GOVERNEMANTA:Hisy ny fanadihadiana mikasika ny savorovoro fizarana "panier garnie"mitentina 65 000Ar ho an'ireo mpiasam-panjakana anivon'ny Ministeran'ny fanabezam-pirenena.Andray andraikiny noho izany ny IGE(Inspection Générale de l'Etat) mba hafatarana izay tompon'andraikitra nahatonga ny savorovoro.
07/01/2020 - 10:00 : ANJOZOROBE:Vehivavy telo sy lehilahy dimy. Ireo hatreto no olona nosamborin’ny mpitandro filaminana tany amin’iny distrikan’Anjozorobe iny taorian’ilay famonoana zandary nitranga tao amin’ny kaominina Ambohibary Vohilena, iray andro talohan’ny krismasy teo. Misy amin'ireo ny nandray ajara nivantana tamin'ny fanafihana ary ny hafa kosa dia ny niray tsikombakomba.
07/01/2020 - 08:45 : FILAZANA:Misy rangahy lehibe iray sahabo eo amin'ny 68 taona eo maty tampoka ao amin'ny gare routiere Andohatapenaka amin'izao fotoana izao, raha ny vaovao voaray dia avy any Diego izy,ka tsy misy mahalala ny fianakaviany.
06/01/2020 - 15:00 : FIFIDIANANA KAOMINALY:Hivoaka amin’ny zoma 10 jaonary 2020 ny voka-pifidianana ofisialy ny fifidianana Ben’ny tanàna sy Mpanolontsaina natao tamin’ny 27 novambra 2019 ho an’ny Faritanin’Antananarivo.
06/01/2020 - 14:30 : ANKORONDRANO:Fiangonana pentekotista etsy ankorondrano narodana androany maraina. Miantso vonjy izy ireo amin'ny tsindrihazolena mahazo ataona orinasa sinoa mpamokatra toaka mifanila amin'izy ireo.
Archive du 20191112
Clément Jaona Hiady ho an’i Faniry Ernaivo ny SMM
Izy tenany no nampahafantatra ahy fa voaroaka izy ary tamin’ny alalan’ny “compte fake” fa hatreto tsy mbola nisy fanambarana ofisialy avy amin’ny Filankevitra ambonin’ny Mpitsara (CSM),
Mpiara-dia amin` Fanirisoa Ernaivo “Didy politika iny nivoaka iny”
Taorian`ny fanapahan-kevitra noraisin`ny fanjakana momba ny raharaha Fanirisoa Ernaivo, dia naheho ny tsy fahafaliany ireo mpanara-dia azy.
Kandidan’ny IRD efa voaheloky ny fitsarana Nametraka fitoriana ny kandida Aristide ao Brickaville
Nitory any amin’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana ao Toamasina mba hanintsanana ny kandida laharana faha-4 Randrianasolo José Clément, izay atolotry ny IRD ao amin’ny kaominina Ambanivohitr’i Brickaville ny kandida laharana faharoa Randriatovoniaina Aristide.
Kandidà Tonton Josè “Soalandy Mifankatia sy Miara-miasa no Mandroso”
Tsy mba misora-tena toa voatango na midera tena toa papelika ny kandida Herinaivo Ravaojanahary, raha eo amin’ny lafiny asa fampandrosoana ny tanàna no resahina.
Fanotana ireo bileta tokana Ho vita anio 12 novambra
Ho vita tanteraka anio 12 novambra ny fanotana ireo bileta tokana ilaina sy ampiasaina amin’ny fifidianana ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina izay atao ny 27 novambra ho avy izao,
Boriborintany voalohany Saika HVM sy TIM avokoa ireo sefo fokontany nesorina
Sefo fokontany miisa 13 amin’ireo fokontany miisa 44 mandrafitra ny boriborintany voalohany eto Antananarivo Renivohitra no nesorina sy nosoloina tamin’ny toerany ny herinandro teo, raha ny fampitam-baovao voaray.
Andry Rajoelina Tsy arakaraky ny kabary ny asa…
Mihazakazaka amin’ny fampanantenana hatrany ny filoha Andry Rajoelina, saingy tsy arakarak’izay ny zava-misy.
Dede Ankadimanga “Hatao Mangarahara ny fitantanana »
Anisan`ireo kandidà ben`ny tanàna tohanan`ny antoko Tia Tanindrazana Rakotondrafara Jean De Dieu na “Dede”, mitondra ny lah. faha-06 ao amin`ny kaominina Ankadimanga.
Kaominina Anosizato andrefana Asa maro no ho vita rehefa tsara tantana ny vola
Tena nihoapampana ny famoaham-bola teny anivon’ny kaominina Anosizato Andrefana tamin’ny fotoan’androny.
Savorovoro ao amin’ny JIRAMA Tale maromaro nesorina
Nirarakopana ny fanesorana tompon’andraikitra tao amin’ny orinasa Jirama omaly.
Aretin’ny voasarin’Ambohijafy Nahitan’ny VSM fanafana
Nankalazaina tetsy amin’ny Tahala Rarihasina omaly ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Siansa.
Ady tanin’ny Silamo sy ny Hindou Niravona ihany 150 taona aty aoriana
Nampahafantarina tetsy amin’ny masoivohon’i India tetsy Tsaralàlana omaly ny fivoahan’ny didim-pitsarana mahakasika ny ady tany nifanaovan’ny Silamo sy ny Hindou eo amin’ilay tempoly Babri- Ram Janambhoomi.
Basikety Tetikasa IBF EPP Antsararay Nofaranana tanteraka omaly
Nofaranana ofisialy omaly alatsinainy 11 novambra 2019 maraina ilay tetikasa IBF “Fampianarana ny taranja basikety eny anivon’ny sekoly”
Rugby ady volabe teny Malacam Norombahin’ny CNaPS Rugby nanoloana ny Cosfa
Ny ekipan’ny CNaPS Rugby no nandrombaka ny amboara vola be natolotra teny amin’ny kianja Malacam Antanimena tamin’ny alahady
Fisorohana ny lozam-pifamoivozana Tsy ankitsitsy ny fampiharana lalàna manomboka eto
Nitombo avo 2 heny ny lozam-pifamoivoizana nisy teto Madagasikara tamin’ity taona 2019 ity raha oharina ny taona 2018.
Orinasa mpanao Goudron eny Alasora Mbola olana tsy mety voavaha…
Taorian’ny hetsika nataon’ireo mponina monina eny Ankazobe Alasora mikasika ny tokony hanalana tsy misy hatak’andro ilay orinasa mpanodina goudron terena hatsangana eny an-toerana dia nisesy ny fidinana ifotony nataon’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny toy ny avy ao amin’ny minisiteran’ny fanajariana ny tany, ny ofisim-pirenena misahana ny tontolo iainana…
Tetikasa PECEB via logiciel VIEN Tsy ho taraiky amin’ny fahaizana lalàna intsony ny vahoaka
Tsy mahay lalàna ny ankamaroan’ny sarambabem-bahoaka ankoatra ireo nianatra izany manokana.
Fanohizana fianarana any ivelany Mahasarika ny maro ny any Kanada
Orinasa iray manampy ireo rehetra te hipetraka any Kanada ny “VJ Consulting”.
Nombana kely Niharan’ny areti-maso mampiahiahy…
Mandray ny fahatelo taonany i Nombana Rakotoarison, monina any Talata Volonondry no tratran’ny areti-maso mampivarahontsana. Raha ny filazan’ny ray aman-dreniny, herinandro taorian’ny fakany fialantsasatra tany Mahajanga no niseho ny soritr’aretina.
Lalana amboarina etsy Besarety Amin’ny 14 desambra vao azo handehanana
Tapaka nanomboka ny sabotsy lasa teo ny lalana amboarina etsy Besarety. Amin’ny 14 desambra ho avy izao, vao azo ampiasaina tanteraka ity lalana ity, hoy ireo mpiasa.
Beloha Androy Tra-tehaka ireo 8 lahy nandroba 20 tapitrisa ariary…
Ny talata 22 oktobra teo, nisehoana fanafihana mitam-piadiana nataona andian-jiolahy maromaro tao amina tokantrano iray tao amin'ny kaominina Tranoroa,